न्युरोड र मैतिदेवीमा बाटो-बाटोमै साबुन-पानी :: समिक्षा अधिकारी :: Setopati
न्युरोड र मैतिदेवीमा बाटो-बाटोमै साबुन-पानी
समिक्षा अधिकारी काठमाडाैं, चैत ५
मंगलबार मैतिदेवीमा व्यवस्था गरिएको साबुन-पानीले हात धुन सिकाउँदै। तस्बिरः समीर श्रेष्ठको इन्स्टाग्राम।
काठमाडौंका प्राचीन हिति हुन् वा ढुंगेधारा, पानी आउँदैन। काकाकुलको उदाहरण पाएको काठमाडौंमा बाहिरफेर पानी खान परे किन्नैपर्छ। अझ पानी कम हुने याम नै। यस्तोमा कोरोना भाइरसको आतंक। बेला-बेला साबुन पानीले हात धुनुपर्ने! घर-अफिस बाहिर साबुन बोकेरै हिँड्न सके पनि कता पाउनु पानी?
यही समस्यालाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौंका केही ठाउँका मनकारी मान्छेले बाटामा हात धुने साबुन र पानी राखिदिएका छन्।
न्युरोड पिपलबोट र आरबी कम्प्लेक्सबीच पर्ने पाको सडकमा बटुवालाई हात-मुख धुन साबुन-पानी व्यवस्था गरिएको छ। यहाँका केही मोबाइल व्यवसायी मिलेर सडक छेउमा नीला पानी ट्यांकी र ह्यान्ड वास/साबुन राखिदिएका छन्।
'हामीले व्यक्तिगत पहलमा पानी र साबुन व्यवस्था गरेका हौं। महामारी बेला यति त गर्न सक्छौं नै,' साबुनपानी व्यवस्थापकमध्ये एक स्थानीय मोबाइल व्यवसायीले भने, 'पसलमा ग्राहक चाप कम भयो। के गर्ने भन्दा दुई-चार जनाले यही उपाय सुझाए। सामाजिक सेवा भयो नि।'
सडकमा हिँड्नेलाई कहाँ-कसरी हात धुने भन्ने समस्या समाधान गर्न र सुरक्षित महशुस गराउन साबुन-पानी राखिएको उनले बताए। आफू र आफ्ना ग्राहकका लागि सानो सहयोग गर्दा मानसिक त्रास कम हुने उनीहरूको भनाइ छ।
न्युरोडमा हात धुँदै बटुवा। तस्बिरः समिक्षा अधिकारी
यो सडक परिसरमा अहिले १२ वटा ड्रममा पानी रखिएको छ। तीन जना व्यवसायीले करिब तीन लाख रूपैयाँ लगानी गरेर साबुन-पानी र हात धोएको पानी जम्मा गर्ने बाल्टिन राखिदिएका हुन्।
उनीहरूले दुई साताअघि यो सेवा सुरू गरेका हुन्। केही दिनभित्रै रत्नपार्क क्षेत्रमा पनि व्यवस्था गर्ने योजना छ।
'सामाजिक काम गरेको हो। चर्चा पाउन होइन,' महर्जन थरका उनी आफ्नो नाम भने खुलाउन चाहँदैनन्।
महर्जनका अनुसार मोटरसाइकल चलाइरहेकाले समेत रोकिएर यहाँ हात-मुख धुन थालेका छन्। कतिपय बटुवा भने 'यो कसका लागि हो' भनेर अलमलिएका पनि छन्। अलमलबीच दैनिक २०० सय हाराहारीले हात-मुख धुने उनले बताए।
'पसल आउने ग्राहकलाई पनि हात धोएर आउन प्रोत्साहन गरिरहेका छौं,' महर्जनले भने, 'ग्राहक पनि सुरक्षित, हामी पनि। सानो प्रयासले ठूलो संकट टर्छ भने किन नगर्ने। बरू यो त सबैले आफ्नो घर, पसल अगाडि व्यवस्था गरिदिए हुन्छ।'
उनीहरूले यहाँ प्रत्येक चार दिनमा ट्यांकरबाट पानी मगाएर व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। प्रत्येक ड्रम २५० लिटरको छ। छेउमा फ्लेक्समा 'हात धुन र सुरक्षित रहन' सूचना पनि लेखिएको छ।
यस्तै खाले प्रयास मैतिदेवी मन्दिरअगाडि पनि गरिएको छ।
मैतिदेवी युनाइटेड क्लबले सडकछेउमा साबुन-पानी राखेर हात-मुख धुने व्यवस्था मिलाएको हो। बेला-बेलामा हात धुनु सधैं फाइदाजनक साथै कोरोना फैलिएका बेला झनै आवश्यक भन्दै स्थानीय क्लबले यो व्यवस्था गरेको स्थानीय संजय श्रेष्ठले बताए।
मैतिदेवीमा हात धुने व्यवस्था। तस्बिरः समिक्षा अधिकारी
'एक जना मात्रै रोगी मान्छे यहाँको होटल, पसल वा मन्दिरमा आए धेरैमा फैलिन सक्छ,' क्लबका उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले भने, 'जनचेतनासहित गरिएको सानो काम समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण बन्न सक्छ भने किन नगर्ने?'
आफ्नो क्लबले जस्तै हरेक संस्था वा क्लबले बाटामा हात-मुख धुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। श्रेष्ठका अनुसार दस हजार लगानीमा मंगलबारबाट सडकमा साबुन-पानी राखिएको हो।
'हिजो बिहानबाट सुरू गरेको हो। तीन वटा साबुन हिजै सकियो,' श्रेष्ठले भने, 'धेरैले प्रयोग गर्नुभएको छ। बच्चालाई पनि सिकाउनुभएको छ। यो भनेको हाम्रो काम प्रभावकारी हुनु हो।'
यहाँ कोरोनाबारे र हात धुन किन जरूरी छ भन्ने जानकारी पनि लेखिएको छ।
'रोगले तेरो वा मेरो भेद नछुट्याउने' बताउँदै श्रेष्ठ थप्छन्, 'मेरो जिम्मेवारी होइन भनेर चुप बस्ने बेला छैन। सकिन्छ भने सबैले आफ्नो घरअगाडि साबुन-पानी व्यवस्था गर्नुपर्छ।'
पाको क्षेत्र वा मैतिदेवी घुम्ने बटुवाले सडकमा राखिएको नीलो ड्रम र साबुन सजिलै देख्न सक्छन्। यस क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने हात धुन नबिर्सिनु होला।
न्युरोडमा हात धुने व्यवस्था। तस्बिरः समिक्षा अधिकारी
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत ५, २०७६, ०९:०५:००